ဂီယာလျှော့, Cycloidal မြန်နှုန်းလျှော့ချ, Worm ဂီယာအုံ, DC မော်တော် - Devo ဂီယာ
Helical ဂီယာ Reductor
Nmrv Worm ဂီယာလျှော့
Nmrv တီကောင်ဂီယာလျှော့ချပါက, volume ထဲမှာပြေးနှင့်အနိမ့်ဆူညံသံအတွက်ချောမွေ့ output ကို torque အတွက်ကြီးမားသောထိရောက်မှုဖြာအတွက်မြင့်မားသောအလင်းအလေးချိန်, သေးငယ်ပါတယ်။ ဒါဟာအားလုံးရာထူးများအတွက် suitbale ပါပဲ။
R ကိုစီးရီး helical ဂီယာလျှော့ချမကြာသေးမီနှစ်များတွင်ပြည်ပကနေမိတ်ဆက်အနေနဲ့အဆင့်မြင့်ဒီဇိုင်းအယူအဆဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာကျိုးကြောင်းဆီလျော်ဖွဲ့စည်းပုံအားဘက်စုံမြင့်မားယုံကြည်စိတ်ချရ, အနိမ့်သောအပူချိန်မြင့်တက်လာကြီးမား bearing စွမ်းရည်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏တိုင်းပြည်၏ရည်ရွယ်ချက်မှာအဖြစ်မှန်နှင့်အတူပေါင်းစပ်ကောင်းသောပေါင်းစပ်စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်အတူဖွံ့ဖြိုးပြီးနှင့်ထုတ်လုပ်နေသည်။ ဒါဟာအနိမ့်အမြန်နှုန်းနှင့် သာ. ကြီးမြတ် torque ရရှိရန်စသည်တို့က F စီးရီး K ကိုစီးရီး, S ကိုစီးရီးတွေနဲ့ပေါင်းစပ်နိုင်ပါတယ်။
Devo R ကိုစီးရီးခြေလျင် helical ဂီယာလျှော့ချတပ်ဆင်ထား
Devo R ကိုစီးရီး RX 37 ~ 157 တင်းကျပ်သွားခြမ်း single ...
w ဒေါင်လိုက် WPA ဂီယာလျှော့ချအလျားလိုက်ဂီယာ box ကို ...
WPA မြန်နှုန်း reducertransmission ဂီယာလျှော့ချဟောရိ ...
WPA WPS တီကောင်မြန်နှုန်းလျှော့ချ reductor ဂီယာအုံ WPA ...
(J) ZQ 250-1000 စီးရီးပျော့ဂီယာမျက်နှာပြင်ဂီယာအုံ ...
(J) ZQ constru များအတွက် 850 ပျော့ဂီယာမျက်နှာပြင်ဂီယာအုံ ...
(J) ZQ constru များအတွက် 650 ပျော့ဂီယာမျက်နှာပြင်ဂီယာအုံ ...
အရည်အသွေးမြင့်မား RX စီးရီး helical ဂီယာ reductor
အရည်အသွေးမြင့်မား zq 500 ဂီယာလျှော့ချ zq 350 gearbo ...
2019 ခုနှစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပူအရောင်းမြင့်သော torque မြန်နှုန်းလျှော့ချ ...
Jiangsu Devo ဂီယာနည်းပညာ Co. , Ltd ဒါဟာစီးပှားရေးစိတ်ဝိညာဉ်နှင့်အတူလူငယ်များ၏အုပ်စုတစ်စုကတည်ထောင်ခဲ့ပါတယ် 2018. ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ဒါဟာနှစ်ပေါင်း 100 အတွင်းအကောင်းတစ်ဂီယာ box ကိုအောင်ဆုံးဖြတ်သည်။ ထုတ်ကုန်စျေးကွက်အဓိကအားဖြင့်ကိုယ်ပိုင် solutions.On နှင့်အတူအပြန်အလှန်ယုံကြည်မှုနှင့်အပြန်အလှန်၏အခြေခံဖောက်သည် overseas.Provide အာရုံစိုက်သည်အိမ်တွင်နှင့်ပြည်ပမှာကောင်းကောင်းရောင်းချ, D, ဒီဇိုင်း, အရောင်းအဖွဲ့သည်; အဆိုပါကုမ္ပဏီပရော်ဖက်ရှင်နယ် R & amp နှင့်အတူ, 50-100 လူတွေဖြစ်ပါတယ်
အမှတ် 403,2တည်ဆောက်ခြင်း, ပစ္စည်းစျေး, အမှတ် 170, Xiadian လမ်း, Xuzhou, Jiangsu, တရုတ် (ပြည်မကြီး),
Nmrv63 , Nmrv Worm ဂီယာအုံ , Nmrv130 , Nmrv လျှော့ , Nmrv050 , ဂီယာအုံ Nmrv ,